အမိန့်ကြေညာစာနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ | Myanma Railways
Home/ အမိန့်ကြေညာစာနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ
ရထားလမ်းအနီးဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်ကြသော လုပ်သားပြည်သူများနှင့် အမျိုးမျိုးသော တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများသို့ ပန်ကြားချက်
ရထားလမ်းတစ်လျှောက် ရထားဖြင့်တိုက်မိ၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သေခဲ့ကြတာများလှပြီ။
ရထားလမ်းပေါ် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ ဆော့ကစားခြင်း၊ ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောခြင်း၊ အစားအစာချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ခြင်း၊ ရထားလမ်းဘေးနှင့် ရထားလမ်း(၂)လမ်းကြားမှ စက်ဘီး/ ဆိုင်ကယ်စီးခြင်း၊ ကြီးမားလေးလံသော ပစ္စည်းများထမ်းရွက်သယ်ယူခြင်း၊ နွားကျောင်းခြင်း၊ စျေးခင်း ရောင်းခြင်း၊ အဝတ်နှင့် ပစ္စည်းများ လှမ်းခြင်း၊ ယာဥ်များရပ်ထားခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ကြပါနဲ့။
ရထားလမ်းဖြတ်ကျော်လျှင် ဘေးဘယ် / ညာ နှစ်ဖက်စလုံးကြည့်ပါ။ လွတ်မည်အထင်နဲ့ မကူးပါနဲ့၊ ရထားမလာကြောင်း သေချာမှဖြတ်ကူးပါ။
ကားလမ်းကူး၊ လှည်းလမ်းကူးများတွင် ဂိတ်ပိတ်ထားပါက လုံးဝဖြတ်မကူးပါနဲ့၊ ဘေးမှလည်း ကျော်ဖြတ်မကူးပါနဲ့။
သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ဆွံ့အနားမကြားသူများ၊ မစွမ်းမသန်သူများ၊ မကျန်းမာသူများနှင့် ကလေးသူငယ်များ၊ ခရီးသွားအဖော်မပါပဲ ရထားလမ်းဖြတ်မကူးပါနဲ့။
ရထားသွားနေသည်ကိုတွေ့ပါက မိမိကိုယ်တွင် စောင်၊ ပုဆိုး၊ ပုဝါများ၊ ပတ်ထားလျှင်ဝေးဝေးမှ ရှောင်ပါ၊ ရထားအရှိန်နှင့် လေဟပ်၍ အဝတ်များငြိသွားလျှင် လူလည်း ရထားအောက်ဝင်နိုင်သည်။
ရထားစီးခရီးသည်များသို့ သတိပေး ကြေငြာချက
- - - - - - - -မှ - - - - - - - - - ခရီးတလျှောက် - - - - - - - - - နှင့် - - - - - - - - ၊ - - - - - - - နှင့် - - - - - - ကြားရှိ ဂုံးတံတားများနှင့် ခေါင်မိုးစီးခရီးသည်များ တိုက်မိသေဆုံးခဲ့တာတွေများပါပြီ၊ ခေါင်မိုးပေါ် မစီးပါနဲ့၊ စီးရင်တိုက်၍ သေမည်။
ရထားမရပ်မီ အတက်/အဆင်း မလုပ်ပါနဲ့။ လိမ့်ကျရင် ရထားကြိတ်၍ သေမည်။
ရထားစောင့်နေစဥ် ရထားနှင့်လွတ်အောင် မျဥ်းဝါအပြင်နေပါ။ မျဥ်းဝါအတွင်းဝင်ပါက ရထားပွတ် တိုက်ရင်သေမည်။
တွဲကြားနှင့် အတက်/အဆင်းပေါက်မှ မစီးပါနဲ့။ စီးနေရင်းပြုတ်ကျရင် ရထားကြိတ်၍ သေမည်။
လူကူးခုံးကျော်တံတားရှိက ၎င်းပေါ်မှ ကူးပါ။ မရှိက ဘေးဘယ်/ညာ နှစ်ဖက်စလုံးကြည့်၍ ကူးပါ။ လွတ်မည်အထင်နဲ့ မကူးပါနှင့် တိုက်ရင် သေမည်။
တွဲကူးရင် ခြေနင်းပြား၊ လက်ကိုင် ပါ/မပါ ကြည့်ပြီးမှကူးပါ။ ပြုတ်ကျရင် ရထားကြိတ်၍ သေမည်။ သစ်လုံးတွဲ၊ ဆီလုံးတွဲ၊ ပက်လက်တွဲ၊ ကုန်တွဲများပေါ် လိုက်ပါမစီးနင်းပါနဲ့။ ပြုတ်ကျရင် ရထားကြိတ်၍ သေမည်။
ရထားလမ်းပေါ်၌ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်ဆောင်ရန်၊ ‌‌ရှောင်ရန်အချက်များ
၁။ ဇလီဖားတုံးထိပ်မှ (၁)ပေ(၆)လက်မအထိ ရထား ကိုယ်ထည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်၍ ဇလီဖားတုံးထိပ်မှ အနည်းဆုံး(၄)ပေခန့်အကွာမှ လမ်းလျှောက်ပါမှ ဘေးကင်းမည်ဖြစ်ပါမည်။
၂။ ရထားသွားနေစဥ်တွင် ရထားသံလမ်းပေါ်၌ လမ်းမ လျှောက်ပါနှင့်၊
၃။ ရထားသံလမ်းပေါ်တွင် ထိုင်၍ကင်းမစောင့်ပါနှင့်၊ ကင်းစောင့်ရင်းအိပ်ပျော်သွားပါက ရထားတိုက်မိ မည်၊
၄။ ရထားသံလမ်းအား ခေါင်းအုံး၍ မလဲလျောင်းပါ နှင့် အိပ်ပျော်သွားတတ်သည်၊
၅။ အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲထားသူများကို ရထားလမ်းပေါ်တွင် တာဝန်မပေးအပ်သင့်ပါ၊ အိပ်ပျော်ပြီး ရထားတိုက်မိမည်၊
၆။ အအေးမိနှာစေး၊ ချောင်းဆိုးသဖြင့် သောက်သုံးရသော အင်္ဂလိပ်ဆေးများသည် အိပ်ငိုက်စေတတ်သည်။ ထို ဆေးများကိုသောက်သုံးထားပါက အထူးသတိထားပါ။
၇။ စိတ်မမှန်သူများ၊တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ဖောက်ပြန်တတ် သူများ၊ ဝက်ရူးပြန်တတ်သူများကို ရထားလမ်းပေါ် တွင် တာဝန်မပေးပါနှင့်၊
၈။ ပုဆိုး၊ ပုဝါ၊ စောင်များပတ်ထားပြီး ရထားအနီးမကပ် ပါနှင့်၊ ရထားဖြတ်သန်းသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် လေဝဲကြောင့် ပုဆိုး၊ ပုဝါ၊ စောင်များလွင့်ပါ၍ ရထား ဖြင့်ငြိပြီး လူကိုပါအသက်ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက် စေပါသည်။
၉။ ရန်ကုန် - မန္တလေးအကြားတွင် ရထားပြေးလမ်း အစုန်/အဆန်နှစ်လမ်းရှိသည်။မိမိမျက်နှာကို မြောက် ဘက်သို့ မျက်နှာမူပါက ဘယ်ဘက်တွင် အဆန်လမ်း ရှိမည်။ ညာဘက်တွင် အစုန်လမ်းရှိမည်။ ရထား လာသည်ကိုတွေ့ပါက ရထားနှင့်လွတ်ကင်းသည့် နေရာတွင် အားလုံးရပ်ပြီး ရထားဘက်သို့မျက်နှာမူ၍ နေသင့်ပါသည်။ တစ်ခါ တစ်ရံတွင် အစုန်၊ အဆန် နှစ်ဘက်စလုံးမှ ရထားလာ တတ်၍ နှစ်ဖက်စလုံးကို ကြည့်ရန် လိုပါမည်၊
၁၀။ ရထားဟွန်းသံကျယ်သော်လည်း နားထောင်သူက အာရုံမရောက်ပါက မကြားနိုင်ပါ၊
၁၁။ ရထားလာနေစဥ် အစုန်၊ အဆန်လမ်းအကြား၌ မရပ် ပါနှင့်၊ အကယ်၍ အစုန်၊ အဆန်နှစ်လမ်းအကြားသို့ ရောက်နေပြီး တစ်ဘက်သို့ကူးရန် မဖြစ်နိုင်ပါက အစုန်၊ အဆန်နှစ်လမ်းအကြားတွင် ထိုင်၍ဝပ်ချလိုက်ပါ၊
၁၂။ အသက်အရွယ်ကြီးသူများအနေဖြင့် အဖော်မပါပဲ ရထားလမ်းပေါ် မသွားသင့်ပါ။
၁၃။ ရထားမှာဘရိတ်ဖမ်းသော်လည်း ချက်ခြင်းရပ်တန့် မသွားဘဲ၊ မိုင်ဝက်ခန့်ရောက်မှ ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရထားကိုအဝေးမှ ရှောင်ပါ၊
၁၄။ ရထားလမ်းတံတားပေါ်မှ ဖြတ်သန်းခြင်းမပြုမီ ရှေ့/ နောက် ရထားသွားလာမှုကိုကြည့်ပြီး၊ ရထားမရှိမှသာ တံတား ပေါ်မှ မြန်မြန်ဖြတ်သန်းပါ၊
၁၅။ ဘေးအန္တရာယ်လွတ်ကင်းသည့်နေရာတွင် ကင်းနေ ရာကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ထိုနေရာတွင် ချုံပုတ်ရှိနေပါ ကခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ မြေကိုညီညာအောင်ပြုပြင် ပေးခြင်းတို့ဖြင့် သက်သောင့်သက်သာနေနိုင်၊ ထိုင်နိုင် စေရန်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ရထားဖြင့် မလွတ်ကင်း နိုင်သောနေရာတွင်နေခြင်းဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးတတ် သည်ကို သတိပြုပါ။
THE MINISTRY OF RAIL TRANSPORTATION
1. For the Dry Ports projects which will be implemented in Yangon Region (Ywathargyi) and Mandalay Region (Myitnge), the Tender Invitation and Evaluation Committee led by Ministry of Rail Transportation selected the (7) potential companies on 5th November, 2014 as prior position in the first step. In the second step, the developers competed undertaking the preliminary survey in accordance with their proposals. The (6) companies submitted the Feasibility Study reports to the committee on 9th January, 2015.
2. In line with rules and regulations, the following (5) companies were evaluated and short listed as second step potential developers by the committee.
(a) KERRY Logistics Network
(b) Resources Group Logistics Co.,Ltd
(c )KMA Shipping Co.,Ltd
(d) Malikha Automobile Co.,Ltd
(e) UMG Logistics Co.,Ltd
3. As the third step, the above mentions of short listed companies have to submit their detailed proposals and documents needed to proceed tender completion.
4. The proposal forms (English/Myanmar) will be available at the cost of Ks 1,000,000 (One Million Myanmar Kyat) from the date on 20th July, 2015 during office hour at Deputy General Manager, Supply Department, Myanma Railways, Corner of Theinbyu Street and Merchant Street, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar. Phone 95-1-291985, 291994, with the official letter of the respective company.
5. The proposals must be submitted to Deputy General Manager, Supply Department, Myanma Railways, Corner of Theinbyu Street and Merchant Street, Botahtaung Township, Yangon not later than 14:00 hr, on 18th September, 2015. Late submission shall be not entertained.
6. Myanma Railways will select th (2) potential developers which are mostly qualified. Enquires can be made by calling telephones +95-67-77005, 77025, 77024 and also mail to kampi.leitui@gmail.com